गगन थापाको चे’तावनी,- ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आ’क्रमण गर्नेसँग अब हिसाबकिताब माग्नुपर्छ – Life Nepali
गगन थापाको चे’तावनी,- ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आ’क्रमण गर्नेसँग अब हिसाबकिताब माग्नुपर्छ
काठमाडौं, ११ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री गगन कुमार थापाले सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आज चितवनमा भएको आ*क्रमणको घोर निन्दा गरेका छन् । चितवनमा एक कार्यक्रममा सहभागी जनाउन गएको बेला शाहीमाथि उनी बसेकै होटलमा पुगेर अज्ञात समूहले नि*र्घात कु*टपि*ट गरेको हो । शाहीको टाउकोमा ग*म्भिर चोट लागेको छ । उनलाई थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याईएको छ ।कांग्रेस नेता थापाले शाहीमाथि आ*क्रमण गर्नेलाई कायरको संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्-‘ज्ञानेन्द्र शाही माथि आ*क्रमण गर्ने विचरा कायर हरुका बारेमा के टिप्पणी गर्नु? यो कायरताका लागि उक्साउनेहरु दो*षी हुन्। अब हि*साबकिताब यिनैसंग माग्नुपर्छ।’
शाहीमाथि शुक्रबार भरतपुरको चौविसकोठीमा नेपालका लागि नेपाली अभियानले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम बिथोलिएपछि आफू बसेको होटलबाट बाहिरिने क्रममा दिउँसो आ*क्रमण भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरको होटल ग्लोवलबाट बाहिरिने क्रममा बा३ख ८४५८ नंको माइक्रोबसमा आ*क्रमण भएको हो । युवा समूहले ढ*ुङ्गा, र*ड, ला*ठी प्रहा*र गरी माइक्रोबसभित्र रहेका शाहीसहितको समूहमाथि आ*क्रमण गरेको हो ।
प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार घाइते शाही चितवन मेडिकल कलेजको उपचारपछि काठमाडौँ ल्याईएको छ । तर, शाहीको अवस्था खत*रामुक्त रहेको मल्लले जानकारी दिएका छन् । शाहीले काठमाडौँको अस्पतालमा उपचार गर्न चाहेकोले नै उनलाई यहाँ ल्याईएको बताइएको छ । उनको खुट्टामा चोट लागेको छ भने टाउको र शरीरमा स*मस्या छ । आ*क्रम*णमा घा*इते भएका अन्य दुईको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए ।
प्रहरी उपरीक्षक मल्लका अनुसार सो क्रममा आ*क्रमण गर्ने एक जनालाई प*क्राउ गरिएको छ । शाहीमाथि आ*क*्रमण भएको खबर पाउनासाथ उद्धार गरिएको प्रहरी उपरीक्षक मल्लको भनाइ छ । त्यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट युवाहरुले चौविसकोठीमा शाहीले सम्बोधन गर्ने गरी गर्न लागिएको कार्यक्रम बिथोलेका थिए । झ*डप हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले पनि कार्यक्रम नगर्न आ*ग्रह गरेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए ।
Previous दशैंसँगै बढ्यो : विदेशी मुद्राको विनिमयदर !
Next म’हरा सरमाथिको आ’रोपमा स’त्यता छैन, बो लेको कुरालाई पत्रकारले ब’ङ्ग्याएर लेखिदिए -रोशनी